Miiraha wanaagsan ayaa si fiican u ilaalin kara mashiinkaaga. Kuma talineyno inaad iibsato shaandho qiimo jaban. Soosaarayaasha miirayaasha noocaas ah ayaa laga yaabaa inay leeyihiin waddo loo maro markay soo saaraan alaabada. Birta khafiifka ah, dabacsan (ama la jarjaray) qalabka miiraha iyo goomayaasha tayada liita waxay sababi karaan dhicis dhicis ah, iyo alaab-qeybiyeyaashan ...
Beddel tallaabooyinka miiraha saliidda iyo saliidda
1. U orod mashiinka si aad u kululaato, u joojiso una xidho waalka hawada ka baxa, oo fur mashiinka shidaalka hal mar si nidaamku u yareeyo cadaadiska. 2. Fur waalka waasidka oo saliidda ka daadi. Ka dib markaad saliidda daadiso, xir waalka oo saliidda u qaad xarunta daaweynta saliidda qashinka. 3. Ka saar ...
Saliida mishiinka ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaara matoorka. Waxay ka caawisaa qaboojinta mashiinka iyadoo loo wareejinayo kuleylka. Ku xirida farqiga u dhexeeya giraanta bistoolada iyo darbiga silsiladda; dhuuqista wasakhda; iyo joojinta walxaha danbas sida haraaga gubashada. Wasakhda waxay noqon kartaa noole sida fangaska iyo bacte ...